Sida loo abuuro bandhigyo soo jiidasho leh Canva | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo abuuro bandhigyo soo jiidasho leh Canva
Lola curiel | | Tababarada, dhowr
Markaad soo bandhigayso shaqo fasalka dhexdiisa ama marka aad u baahan tahay inaad soo bandhigto mashruuc heer xirfadeed ah, leedahay taageero indho qabad leh, taabashada naqshadeynta, waxaad ka dhigi kartaa fariimaha aad la xiriirto kuwo soo jiidasho leh, sidaa darteed, shaqadaadu waxay yeelan doontaa qiimo badan.
Si kastaba ha noqotee, oo tani wax qarsoodi ah ma aha, mararka qaarkood waxaan ku qabsannaa waqtiga oo aan wax walba qaban karno daqiiqadda ugu dambeysa mana joojin doonno inaan sameyno isbadal habboon oo naga caawin kara inaan soo qabanno dareenka kuwa wax qaata.
Waxaa jira qalab aad u fiican oo naga saari kara dhibaatada noocan ah. Wax badan ayaan u aadaa Canva, barnaamijkan, ayaa laga heli karaa khadka tooska ah iyada oo aan la soo dejisanayn, waa barnaamij fududaynta qaabeynta taas ayaa kuu oggolaan doonta inaad sameysid bandhigyo, sawirro, boodhadhyo iyo waxyaabo kale waqti aad u gaaban iyo qaab aad u fudud oo fudud, adoo adeegsanaya arrimo.
Qoraalka maanta waxaan ku bari doonaa inaad abuurto bandhigyo soo jiidasho leh shaqooyinkaaga Canva waxaanan ku siinayaa xoogaa tilmaamo ah si aad uga faa'iideysato barnaamijkan.Ku hayso aqrinta qoraalkan oo waxaad u macasalaameysaa bogagga lagu caajiso!
1 Xullo shaxd ku habboon shaqadaada
2 Kudar bogag kaa caawinaya tirinta waxa ku jira
3 Ka faa'iideyso ilaha Canva
4 Canva waxay awood u siisaa wada shaqeynta
5 Sida loo badbaadiyo shaqooyinka
6 Tilmaamaha abuurista bandhig wanaagsan
6.1 Wax kastaaba wuu la xiriiraa oo haddii uusan si fiican u hadlin, ha dhigin
6.2 Haddii aad boggaaga ku buuxiso qoraal, waad dhergi doontaa kuwa kaa soo qaadaya
6.3 Shaandheeyeyaasha, xulafada si loo waafajiyo sawirrada
6.4 Soo hel dheelitirka
6.5 Cadee aqoonsigaaga, laakiin adigoon qarqin ujeedada ugu weyn ee boodhka
Xullo shaxd ku habboon shaqadaada
Waxay bixisaa Canva arrimo aan dhammaad lahayn iyo naqshadaha si aad u wanaagsan ayaa loo qabtay. Iyada oo leh meelo si fiican loo qaybiyey iyo midabbo si wanaagsan la isugu waafajiyey. Sidaa darteed, si looga faa'iideysto kartida barnaamijkan, waxa ugu habboon ayaa ah in la doorto shaxd u dhiganta baahiyaha shaqadaada, si loo sameeyo is-beddellada ugu yar ee suurtogalka ah. Xitaa waad ku kala shaandheyn kartaa midab ahaan, si loo arko nashqadaha ku habboon aqoonsiga aad maskaxda ku haysay.
Waxaad had iyo jeer awoodi doontaa inaad beddesho arrimo si dhakhso leh si aad u habeysoXitaa waad beddeli kartaa midabada naqshadeynta oo ku saleysan palette kale. Tani waxay noqon doontaa mid aad waxtar u leh haddii waxa aad soo bandhigaysaa ay yihiin summad ama wax soo saar kuu gaar ah oo aad u baahan tahay inaad la qabsato bandhigga midabada aqoonsiga muuqaalka shirkadaha.
Kudar bogag kaa caawinaya tirinta waxa ku jira
Markaad dooranaysid sheybaar, qaybta "shaxanka" Canva waxay muujineysaa qaabababka isdaba-joogga ah ee kala duwan taas oo u jirta tusaalaha aad dooratay. Hadda waa arrin dib u eegis lagu sameynayo xulashooyinkaas oo la arko nooca slide ee kaa caawinaya inaad si wanaagsan u tirin karto waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee aan sameyno marka aan soo bandhigeyno waa qorista badan. Adoo yeelanaya template meel bannaan, sidoo kale waxaa nalagu qasbi doonaa inaan doorano macluumaadka muhiimka ah waxaana u jiheysan doonnaa inaan si kooban u soo koobno.
Ka faa'iideyso ilaha Canva
Waxay bixisaa Canva ilo badan oo bilaash ah, laga bilaabo sawirada ilaa sawirada guud, iyo xitaa fiidiyowyada. Waad awoodaa uga faa'iideyso kheyraadkan nashqadahaaga oo aad ku darto sawirro, astaamo ama walxo aad adigu abuurtay. Si aad uhesho ilaha Canva, kaliya dhagsii tabta walxaha. Haddii aad rabto inaad soo dejiso ilahaaga, dhagsii tabta "Faylasha la soo galiyay" iyo si fudud adoo jiidaya waxaad rabto inaad isticmaasho ama aad gasho kombuyuutarkaaga waxaad ku soo wareejin kartaa dariiqa Canva waxyaabaha iyo waxyaabaha aad rabto.
Canva waxay awood u siisaa wada shaqeynta
Haddii aad u shaqeyso koox ahaan, Canva sidoo kale waa qalab noqon kara aad u faa'iido badan marka la abaabulayo shaqo iskaashi ah. Si aad u fudud oo aad awoodid sii kuwa kale fursad ay ku helaan bandhiggaaga oo ay u suurtagasho inay wax ka beddelaan.
Si aad u sameyso, waa inaad kaliya sameysaa taabo batoonka «Share»dusha shaashadda oo gal cinwaanada emaylka ee dadka aad rabto inaad la shaqeyso. Waxay awoodi doonaan inay soo galaan waxaadna awood u yeelan doontaa inaad si isku mid ah uga shaqeyso iyo meelo gebi ahaanba ka duwan.
Sida loo badbaadiyo shaqooyinka
Canva si toos ah u kaydiyaa wax kasta oo aad ku sameyso astaantaada, markaa uma baahnid inaad ka walwasho luminta bandhigga. Waxay ku sii jirtaa daruurta, meel walbana, adoo galaya magacaaga isticmaale waxaad heli kartaa dhammaan nashqadahaaga.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ku soo bandhigto kombiyuutarkaaga, sababtoo ah waxay ku siinaysaa ammaan badan ama sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad u dirto, Canva ku keydi qaababkan soo socda: PNG, JPEG, heerka caadiga ah ee PDF, PDF daabacaadda, GIF, MP4 video. Maskaxda ku hay in haddii nashqaddaadu ay leedahay nooc ka mid ah GIF, fiidiyoow ama muuqaal muuqaal leh, haddii aad ku kaydiso PDF dhaqdhaqaaqa ayaa lumaya. Dib u eeg qaabkaaga oo dooro qaabka adiga waxtar kuu leh.
Tilmaamaha abuurista bandhig wanaagsan
Si aad u soo jiidan karto kartida buuxda ee qalabkan cajiibka ah, tixgeli tilmaamahan yar ee aan kuugu soo bandhigi doono si aad u abuurto bandhigyo hal abuur leh oo isku dhejinaya soo-qaadayaashaada.
Wax kastaaba wuu la xiriiraa oo haddii uusan si fiican u hadlin, ha dhigin
Cunsur walba oo aad ku soo bandhigto boggiisa internetka waa inuu la xiriiraa farriin. Haddii aad soo bandhigto waxyaabo uun qurxin ah, waa inaad ka taxaddartaa oo aad ku samaysaa waxoogaa cabbir ah maxaa yeelay waad jah wareerin kartaa dadka ku qaata oo fariintaadu waxay waayi kartaa xoog.
Xaqiiqdii, haddii aad la shaqeysid Canva, Waxaan kugula talin lahaa inaad isku daydo inaadan isticmaalin sawirada iyo sawirada qurxinta leh iyo inaad ku koobnaato inaad ku darto kheyraadkan markay leeyihiin wax la xiriira macluumaadka aad siineyso. Moodooyinka ku yaal Canva horeyba waa loo qurxiyey, sidaa darteed uma maleynayo inay wax badan u baahan yihiin.
Haddii aad boggaaga ku buuxiso qoraal, waad dhergi doontaa kuwa kaa soo qaadaya
Sidaan horay u sheegay, waa khaladaadka ugu badan ee dhaca. Markaan abuureyno isdabajoog, mararka qaar waxbadan ayaan haynaa si aan ugu sheegno inaan bilowno qorista oo aan ka buuxino bogga dhan sharaxaad. Looma baahna oo, wixii intaa ka sii badan, waxay si xun u saamayn kartaa bandhiggaaga.
Markaynu nahay kuwa wax qaata waxaynu aragnaa isbadal ka buuxa qoraalka, maskaxdeenu waxay u egtahay inay go'do. Waxaan si toos ah ugu fikiray: "maxay tahay xaashi ay i sii daayaan" waxaanan ku dhagaysanay soojeedinta fikraddii hore ee ahayd inay noqon doonto mid aad u culus oo aad u daran.
Si looga fogaado taas, isku day inaad u beddesho qoraalkaaga fikradaha muhiimka ah oo aad la xiriirto fikradaha aasaasiga ah ee sharraxaaddaada oo leh sawirro iyo sawirro taas oo ka dhigan waxa aad u sheegayso. Wadahadalka muuqaalku wuxuu noqon karaa mid aad u awood badan xaalado badana, astaan, sawir ama sawir ayaa la xiriiri kara wax ka badan xukun. Kaliya tani caawin mayso dadka ku qaata inay sheekada si fiican u raacaan, waxay kuu adeegidoontaa sidii qoraal ahaan markaad hadlaysid.
Shaandheeyeyaasha, xulafada si loo waafajiyo sawirrada
Haddii aad isticmaasho sawirada bangiyada sawirka, iyo xitaa sawirada Canva ay ku siiso, daaweyntoodu way ka duwanaan kartaa gabi ahaanba. Xeelad aan u arko inay faa'iido badan tahay inaan siiyo sii wadida iyo iswaafajinta qaabeynta soojeedintayda ayaa ah inaan isla shaashadda ku dhejiyo dhammaan sawirrada. Badanaa waxaan ku ciyaaraa wax badan madow iyo cadaan.
isha! Tani had iyo jeer ma shaqeyso, waxaad ubaahantahay inaad tijaabiso shaandheeye sifiican ugufiican sawirada oo dhan waxaana jiri doona shaqooyin aadan awoodi doonin inaad sameyso maxaa yeelay waxaad ubaahantahay inaad muujiso sawirka sida uu yahay.
Soo hel dheelitirka
Waa lama huraan in, marka la dhisayo bandhig, ay jiraan qodobo aad uga ballaadhan kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, waa inaad isku daydaa inaad isku dheelitirto miisaanka bogaggaaga iyo inaysan jirin wax aad u raran iyo kuwa kale oo ficil ahaan faaruq ah.
Haddii qodob aad u dheer yahay, u qaybi laba qaybood. Waxay sidoo kale ka caawin doontaa soo dhoweeyeyaasha inay ku raacaan, markaad beddesho bogagga, waxaad soo jiidanaysaa dareenkooda oo haddii qof lumay dib ayey u hawlgeli karaan.
Cadee aqoonsigaaga, laakiin adigoon qarqin ujeedada ugu weyn ee boodhka
Haddii aad ka mid tahay shirkad ama haddii aad isku dayeyso inaad ku iibiso mashruuc aad iska leedahay soo bandhigidda, waxaad u baahan tahay inaad aqoonsigaaga aad u caddeyso. Gali astaantaada Iyo haddii waxyaabaha ay u oggolaadaan, xitaa waad qaabeyn kartaa iyada oo ku saleysan midabada shirkaddaada ama astaantaada gaarka ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii waxa aad isku dayeyso inaad iibiso ay horey u leeyihiin aqoonsi u gaar ah isla markaana aqoonsigaaga shirkadeed uu aad uga fog yahay waxaad sheegaysid, waxaa fiican inaad gadaal ka gasho, si aan hoos loo dhigin fariinta. Gali astaantaada, saxiix ahaan, meel aan xadin fiiro badan oo mudnaanta koowaad la siinayo sababta ugu weyn ee bandhigga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo abuuro bandhigyo soo jiidasho leh Canva
Waa maxay Pathfinder ee Sawirka iyo sida ay u shaqeyso